at 1:22 PM Labels: အကြော်အလှော်
ကော်မှုန့်နဲ့ ရေကို ၁ အချိုး ၂.၅ နဲ့ ဖျော်ထားပါ။ ကော်မှုန့်ဖျော်တဲ့အထဲမှာ ဆား၊ သကြားနဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့်အနည်းတို့ကို ထည့်ပြီး ဖျော်ထားပေးပါနော်။ ကြက်သည်းနဲ့ အမြစ်ကို သန့်စင်အောင်ရေဆေးပြီးတော့ အသည်းသပ်သပ်၊ အမြစ်သပ်သပ် ပါးပါးလှီး ပြီးတော့ ဆား၊ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်အနည်းငယ်တို့နဲ့နယ်ထားပေးပါ။ ပုစွန်လေးတွေလည်း အခွံနွှာပြီးတော့ ၂ ပိုင်းပိုင်းပေးထားပါ၊ ပြည်ကြီးငါးကို သန့်စင်အောင်ဆေး၊ အနံ့မနံရ အောင်လို့ သံပုရည်လေးနဲ့လည်း နယ်ဆေးပြီး မထူမပါး လှီးပေးထားပါနော်။ မုန်လာဥနီနဲ့ နိုကိုဥကို အခွံနွှာပြီး သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင် လှီးပေးထားပါ။ ကြက်ဥ/ဘဲဥ ကို သမအောင် ခေါက်ပေးထားပါနော်။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ချင်းကို အခွံနွှာ၊ ရေဆေး၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်၊ ချင်းကို ပါးပါးလှီးပေးထားပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ တရုတ်နံနံကို သန့်စင်အောင် ဆေးပြီး လက်မ၀က်အရွယ်လောက်လေးတွေ ရအောင် လှီးပေးထားပါနော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ရင် ဒယ်အိုးထဲ ဆီများများထည့်၊ ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ချင်းကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်၊ ဆီသတ်နံ့မွှေးလာပြီဆိုရင် ကြက်မြစ်တွေကို ထည့်ပြီး အရင် ကြော်ပေးပါ။ ကြက်မြစ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ စိမ့်ထွက်ရည်နဲ့ အသားနူးအောင်လို့ အဖုံးအုပ်ပြီး တည်ပေးပါ။ စိမ့်ထွက်ရည်ခမ်းပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သည်းတွေထပ်ထည့်ပြီး အားလုံးကျက် အောင် တည်ပေးပါနော်။ ပြီးတော့မှ ပုစွန်နဲ့ ပြည်ကြီးငါးလေးထည့်ပြီး မွှေပေး၊ သူတို့က အပူနဲ့ထိတာနဲ့ ကျက်လွယ်တာမို့ သူတို့ကို ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင် မုန်လာဥနီနဲ့ နိုကိုဥ လှီးထားတာတွေ ထည့်ပြီးကြော်ပေး၊ သူတို့နွမ်းပြီဆိုရင် ကော်ဖျော်ထားတဲ့အရည်ကို လောင်း ထည့်၊ ကော်က အပူထိတာနဲ့ ပျော့သွားတာ၊ ပြီးတာနဲ့ ကြက်ဥခလောက်ထားတာကို ထည့်ပြီး အားလုံးသမအောင်မွှေ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်၊ အပေါ့အငံအတွက် အရသာကို မြည်း၊ ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်လေးနဲ့ တရုတ်နံနံလေးထည့်ပြီး အုပ်လိုက်ရုံပါပဲနော်။ အဲ့ဒါက ကော်ကြော်ထွေးထွေးအိအိလေးပေါနော့်။
နည်းနည်းလေး ကြွပ်တာလေးမှ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ မီးအားကို လျှော့ပြီးတော့ ဒယ်အိုးလေး ကပ်အောင် ထားလိုက်၊ အဲ့ဒါလေးကျတော့ ဂျိုးလေးကပ်ပြီးတော့ အနံ့လေး လည်း မွှေးပြီး စားလို့ကောင်းတဲ့ ကော်ကြော် ကြွပ်ကြွပ်လေးရပြီပေါ့နော်။
SHWE ZIN U July 14, 2010 at 8:21 PM
ကော်ကြော်မွှေးမွှေးလေး စားသွားတယ်နော် ဒါပေမဲ့ ဒီတခါ ပုံမမြင်ရလို့ သိတ်တောင် မြိုမကျသလိုဘဲ အဟဲ
လသာည July 15, 2010 at 8:47 PM
တခါမှ မစားဖူးဘူး..။ ဟုတ်တယ် ပုံမပါတော့ .
ဒါပေမယ့် စိတ်မှန်းနဲ့ ပုံဖော်စားသွားတယ်း))
Thanksalot ma ma lu... I like it so much...I will try to make next weekend.. Thanks for sharing..